Google Benchmarks အရေးပါသလား။ | Martech Zone
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 2, 2011 ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 7, 2011 Douglas Karr
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Google Analytics မှသတင်းလွှာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၊ ပထမဆုံးအသံအတိုး၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းဖတ်ပါ။
ယခုလတွင်သင်၏ဂူဂယ်လ် Analytics အကောင့်ရှိစံသတ်မှတ်ထားသော“ benchmarking” အစီရင်ခံစာကိုဤသတင်းလွှာတွင်မျှဝေထားသောဒေတာများနှင့်အစားထိုးနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းလွှာကို Analytics အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုအသုံး ၀ င်သောသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနေသည်။ ဤတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်များကို Google Analytics နှင့်အမည်ဝှက်ထားသောဒေတာဝေမျှခြင်းကိုရွေးချယ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလာသည်။ ဤအမည်မသိသောဒေတာဝေမျှခြင်းကိုခွင့်ပြုသောဝက်ဘ်ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသာဤ“ အခြေခံစံနှုန်း” သတင်းလွှာကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဤအရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ကြီးမားသောအန္တရာယ်ရှိပါသည် ချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ်။ တကယ်တော့ငါကဤမှာအားလုံးအခြေခံစံနှုန်းများဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။ ဆိုဒ်တိုင်းသည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အကြောင်းအရာကွဲပြားခြားနားသည်။ အသွားအလာရင်းမြစ်ပြိုကွဲမှုတိုင်းသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်။ တိုင်းပြည်အလိုက်အချိန်သည်ကွဲပြားသည်။ သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်၏ပထဝီအနေအထားအရသိမ်းဆည်းရန်မဟုတ်ပါ။ ထိုမေးခွန်းများတွင်ဘာသာစကားမပါပါ။
တိုင်းပြည်အတွင်းရှိဘုံဘာသာစကားဖြင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိဆိုဒ်များသို့လည်ပတ်မှုနှင့်စာမျက်နှာမြင်ကွင်းများပါ ၀ င်သောနိုင်ငံများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသလား။ (သို့) ဒီဆိုဒ်များကိုဘာသာပြန်နေပါသလား (ပိုကြာနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလွန်နည်းပါးစွာဘာသာပြန်နိုင်သဖြင့်၎င်းသည်တုံပြန်လာနိုင်သည်)? အဆိုပါဆိုဒ်များအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဆိုဒ်များပါသလား ဘလော့ဂ်များ? လူမှုကွန်ယက်များလား။ တည်ငြိမ်သောဝဘ်စာမျက်နှာများ?
နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ Facebook ကဲ့သို့ကိရိယာများ Social Plugin သည်တုန်ခါမှုနှုန်းများကိုသက်ရောက်မှုရှိသည် သိသိသာသာ Facebook ကြောင့် site ကိုအသုံးပြုသူများကို redirected ။ site ည့်သည်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ဆင်းလာပြီးအခြားလှုပ်ရှားမှုများမပြုလုပ်မီပလပ်အင်ကိုသုံးသောအခါ၎င်းတို့သည်ခုန်ထွက်နေကြသည်။ ဒီမှာကျွန်တော့်ဖောက်သည်တွေဆီကဥပမာတစ်ခုပါ။ သူတို့ဘယ်မှာ install လုပ်တယ်၊ uninstall လုပ်ပြီးရင် install လုပ်တယ် Facebook လူမှုရေးပလပ်အင် သူတို့ရဲ့ site ပေါ်တွင် -
ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်အကြံပေးသည်မှာသင်၏ site ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင် site နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်သာဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့တုံမှုနှုန်းတိုးလာသို့မဟုတ်လျော့ကျလား? visitors ည့်သည်တွေတက်နေသလား၊ အလည်အပတ်ခရီးတစ်လျှောက်ကြည့်ရှုခြင်းအရေအတွက်သည်တက်တက်ကျဆင်းပါသလား။ သင်၏ design ည့်သည်များ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေရန်သင်၏ဒီဇိုင်း (သို့) ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုသင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလိုက်သနည်း။ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို embed လုပ်သည့်အခါ visitors ည့်သည်များ site ပေါ်တွင် stay ည့်သည်များ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်တိုးလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ ဒါပေမယ့်အပတ်တိုင်းအလားတူဗီဒီယိုမျိုးမထည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးလို့မထင်နိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာရှိကောက်နှုတ်ချက်များကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ဒီဇိုင်းကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များအနေဖြင့်လူများသည် post သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသူများနှင့်အလည်အပတ်ခရီးစာမျက်နှာများသိသိသာသာများပြားလာသည်နှင့်အမျှတုံပြန်မှုနှုန်းကျဆင်းလာသည်။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှင်းပြဘဲသင်က stats ကိုပြလျှင်, သင်ကအံ့ leave သင့်ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်သင်ကအခြားဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားပါကသူတို့၏ရလဒ်များထက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုကောင်းသည်သို့မဟုတ်ပိုဆိုးနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာကိုစတင်ခဲ့တယ်။ သတင်းလွှာဖြည့်စွက်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် subscrib ည့်သည်များဖတ်ပြီးသည်နှင့်ပြန်လာကြပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သတင်းလွှာကိုပေးပို့သည့်နေ့များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်သည်များစွာမြင့်မားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်ပျမ်းမျှ ၂၀% နီးပါးတိုးတက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့တွင်သတင်းလွှာရှိပါသလား။ ကောက်နှုတ်ချက်များထုတ်ဝေပါသလား။ သူတို့လူမှုရေးအရသူတို့အကြောင်းအရာစုစည်းပါသလား
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျနော့်အမြင်မှာအခြေခံစံနှုန်းတွေကကျနော့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတိုးတက်အောင်ကျွန်တော့်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အချက်အလက်တွေမပေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်ဖောက်သည်များ၏ဆိုဒ်များနှင့်လည်းစံသတ်မှတ်ချက်များကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အရေးကြီးသည့်တစ်ခုတည်းသောစံနှုန်းမှာအပတ်တိုင်းဖြတ်သန်းသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် site အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုဒ်များကိုတိကျစွာနှိုင်းယှဉ်ရန်ဂူဂဲလ်သည်သူတို့၏သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းပိုမိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိပါက၊ အချက်အလက်သည်အသုံးမဝင်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှခေါင်းဆောင်များအားဤအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်အချို့သောပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Tags: အရက်မိုဘိုင်း add-to- လှည်းနှုန်းထားများslider ကိုလူမှုရေး bookmarkingဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာဝဘ်ကိုယ်ပိုင်